ComWales Limited pamwe chete nemakambani emakambani ("isu" "isu" "edu") anozvipira kuchengetedza uye kuremekedza zvakavanzika zvako. Nezvinangwa zvemitemo yekuchengetedza data, isu tiri dhairekitori uye isu tichagadzirisa yako pachako data maererano neGeneral Data Dziviriro Regulation (EU) 2016/679 nemitemo yenyika inoenderana nekugadziriswa kwedata rako pachako. Ndokumbirawo kuti muverenge zvinotevera kunyatsonzwisisa maonero edu nemaitiro maererano neyako data uye kuti tichaibata sei.
2.ZVINOSVIKIRA KUWEDU RWEDU
2.1 Tinogona kuunganidza nekugadzirisa data revanhu nezvewe mumamiriro ezvinhu anotevera:
2.1.1 paunopedza mafomu pane yedu webhusaiti ("Saiti"). Izvi zvinosanganisira zita rako, kero, email uye nhamba yefoni, inopihwa panguva yekunyoresa kushandisa Saiti yedu, kwaunotikumbira kuti tibate iwe nezve zvinhu zvedu kana masevhisi, nyorera kune yedu yekutumira tsamba, kana kunyorera / kukumbira zvinhu zvedu uye mabasa;
2.1.2 chero nguva iwe yaunotipa ruzivo kwatiri kana uchinge waudza dambudziko neIsaiti yedu, kuita nyunyuto, uchibvunza kana kutibata nesu nekuda kwechimwe chikonzero. Kana iwe ukabatana nesu, isu tinogona kuchengeta rekodhi yeiyo tsamba;
2.1.3 tsanangudzo dzekushanya kwako kune yedu saiti inosanganisira, asi isina kuganhurirwa, traffic data, nzvimbo yenzvimbo, weblogs uye imwe yekutaurirana data, kana izvi zvichidikanwa nekuda kwedu kwekubhadhara chinangwa kana neimwe nzira, uye zviwanikwa zvaunowana (ona chikamu 2.2.2 pane ma Cookies pazasi); uye
2.1.4 chero iwe paunotizivisa ruzivo rwako kwatiri, kana isu tinotora ruzivo kubva kwauri neimwe nzira, kuburikidza neyedu saiti.
2.2 Tinogona zvakare kutora data munzira dzinotevera:
2.2.1 Tinogona kuunganidza ruzivo nezve chako chishandiso, kusanganisira panowanikwa kero yako yeInternet Protocol, nekuda kwezvikonzero zvekubiridzirwa. Isu tinogona zvakare kuunganidza ruzivo nezve chako chishandiso sisitimu yekushandisa uye browser mhando, yehurongwa manejimendi uye nekumhan'arira huwandu hwehuwandu kune vashambadzi vedu. Iyi nhamba yehuwandu pamusoro pezviitiko zvevashandisi vedu uye mapatani, uye haina kuratidza chero munhu.
2.3 Isu tinogona kushandisa yako pachako data kune yedu yepamutemo zvido kuitira:
2.3.1 kukupa ruzivo, kana masevhisi amakakumbira kwatiri;
2.3.2 inobvumidza iwe kutora chikamu mukudyidzana maitiro eSiti yedu, paunosarudza kuita saizvozvo;
2.3.3 simbisa kuti zvemukati kubva kune yedu saiti zvinoratidzwa nenzira inoshanda kwazvo kwauri nechishandiso chako;
2.3.4 kuvandudza yedu saiti uye masevhisi;
2.3.5 maitiro uye kubata chero zvichemo kana kubvunzwa kwakaitwa newe; uye
2.3.6 vanokubata iwe nezvechinangwa chekushambadza pawakanyorerana izvi (ona chikamu 6 kuti uwane rumwe ruzivo).
Yedu Saiti inogona, nguva nenguva, iine ma-link kune uye kubva kune webhusaiti yechitatu mapato. Ndapota cherekedza kuti kana iwe uchitevera chinongedzo kune chero eaya mawebhusaiti, mawebhusaiti akadai anoshandisa mazwi akasiyana kuunganidzwa uye kuvanzika kwewe data rako uye isu hatigamuchire chero mutoro kana mutoro weiyi mitemo. Paunosiya yedu saiti, tinokukurudzira kuti uverenge zvakavanzika ziviso / mutemo wewebsite yega yaunoshanyira.
3.1 Tichaunganidza zvinhu zvakaita sezita rako, kero, nhamba dzefoni uye email kero kana iwe ukaraira zvinhu kana masevhisi kubva kwatiri kungave kuburikidza neSiti yedu kana yakabatana yemasocial media masaiti / mamwe echitatu shamwari shamwari masosi. Isu tinoshandisa ruzivo urwu kuti tigone kuita odha yako uye nekutevera maererano nezvibvumirano zvedu.
3.2 Kuti tiite chibvumirano chedu newe, isu tingangodawo kugovana dunhu rako nevechitatu mapato senge vanopa mubhadharo nemasangano eposvo ekubatsira kuendesa zvinhu kana masevhisi awaraira; izvi zvinogona kusanganisira vadyidzani veEDI, vechitatu vatambi, kana vanopa waranti.
3.3 Tinogona zvakare kushambadzira mhinduro yako pawebhusaiti yedu uye zvekushambadzira zvinhu (zvichitsvaga pakuwana mvumo yako yekutanga pazvinenge zvichidikanwa);
3.4 Tichachengeta ruzivo rwako chero bedzi isu tichida izvi kuti tikupe zvinhu kana masevhisi akarairwa kubva kwatiri uye kwenguva yemakore matanhatu mushure. Kwawakanyoresa kuti ugamuchire tsamba yekushambadzira kubva kwatiri isu tino chengetedza yako data yega yenguva yenguva yakatsanangurwa muchikamu 6 pazasi.
Isu tinotora zvinhu zvakaita senge mazita evashandi vako, nhamba dzerunhare uye kero dzeemail kuitira kuti tikwanise kutaura newe nezvezvinhu kana masevhisi akarairwa newe, kuti tigoisa mamwe maoda uye kuti tipe iwe kune izvo zvinhu uye / kana masevhisi anopihwa. Ticha chengetedza iyo data yako wega kwemakore matanhatu zvichidarika mukupihwa neizvo zvinhu / masevhisi.
5. KANA WAKAKONZERESA KUTI URUDZE RUDO RWEMunhu
Kwatinoda kuunganidza data repamutemo nemutemo, kana pasi pechibvumirano chatinacho newe uye ukatadza kuapa iyo data kana uchinge wakumbirwa, tinogona kunge tisingakwanise kuita chibvumirano chatinacho kana kuti tiri kuyedza kupinda newe. (semuenzaniso kuti akupe zvinhu zvedu kana masevhisi). Muchiitiko ichi, isu tinofanirwa kubvumidza chigadzirwa kana sevhisi yaunayo nesu asi isu tichakuzivisa iwe kana izvi zvirizvo panguva yacho.
6.1 Pamusoro pekushandiswa kwakatsanangurwa muzvikamu 2-4 pamusoro, pamunoratidza kuti mungade kugashira tsamba yekushambadzira kubva kwatiri, nyorera kuzvinyorwa zvedu zvetsamba kana tsambanhau, pinda mune chero yemakwikwi edu kana kutipa ruzivo rwako pazviitiko zvekubatana. , isu tinogona kushandisa yako pachako data kune zvatinofarira zviri pamutemo kuitira kuti tikuudze iwe nezve zvinhu zvedu, masevhisi, mabhizinesi ekugadzirisa uye zviitiko, izvo zvatinofunga zvingave zvinofadza.
6.2 Une kodzero yekusarudza kubuda kubva mukugamuchira ruzivo rwakatsanangurwa muchikamu 6.1 chero nguva. Kuti upinde kunze kwekugamuchira ruzivo rwakadai unogona:
6.2.1 Bata bhokisi rakakodzera iro riri munzira yatinounganidza ruzivo rwako;
6.2.2 kudzvanya bhatani risinganyoreki mune chero kutaurirana kwakadaro kunogamuchirwa; kana
6.2.3 email yedu paDPO@comwales.co.uk kana kutifonera pa ext. 5032 ichipa isu zita rako uye maonline contact.
6.3 Kwawakanyoresa kuti ugamuchire tsamba yekushambadzira kubva kwatiri isu tino chengeta yega data 3 makore kubva pawakapedzisira kutaurirana nesu.
6.4 Nguva nenguva tinogona kutengesa tichimirira mamwe makambani, semuenzaniso nekuwedzera mabhana kumapeji edu ewebhusaiti. Kudzvanya pane izvi zvinongedzo kunokuendesa kune wechitatu-webhusaiti saiti, kwaunofanirwa kubvunza yavo yekuvanzika mutemo. Hatife takagovana data rako rega nechero rechitatu pasina mvumo yako yekutanga.
7. KUGADZIRA UYE KUSVIRA
Isu tinogona kutarisa uye kurekodha kutaurirana newe (sekufambidzana nerunhare uye maemail) nechinangwa chekudzidziswa, chekudzivirira kubiridzira uye kutevedzera. Tine zvakare makamera eCCV uye kurekodha odhiyo kwakaiswa muzvivakwa zvedu nechinangwa chekudzivirira kuparwa kwemhosva uye nekuda kwehutano uye zvikonzero zvekuchengetedza. Ndokumbirawo mubate dpo@comwales.co.uk kuti uwane ruzivo rwekuti tinochengetera ruzivo urwu kwenguva yakareba sei.
8.1 Tinogona dzimwe nguva kubvunza nemasangano ekushambadzira emunhu wechitatu anoshandisa otomatiki yakagadziriswa yeasina kuzivikanwa data kuti ape mazano ezvehupfumi kana fungidziro yekutenga vatengi. Isu hatiite sarudzo dzinobata munhu zvinobva zvangoitwa pamabasa ekugadzirisa zvinhu.
8.2 Dzimwe nguva tinotora cheki yekwereti kune vatengi:
8.2.1 kuitira kuti tigone kuita sarudzo dzechikwereti pamusoro pako; uye
8.2.2 kudzivirira kubiridzira uye kubvisirwa mari.
8.3 Kutsvaga kwedu kunogona kuve kwakanyorwa pamafaira echikwereti chezano rezenisi.
8.4 Kana tichienderera mberi nekuita kiredhiti rechikwereti iwe unogamuchira yakaderera chikwereti mamakisi, isu tine kodzero yekukusakupa zvinhu kana masevhisi pachikwereti uye / kana tinoda kubhadharira kumberi kwezvinhu kana masevhisi aunoda kuda kutenga. Mune ino kesi imwe nhengo yeboka redu inokuzivisa iwe.
8.5 Kana iwe ukapa ruzivo rwenhema kana rwusina chokwadi uye uye isu tichifungidzira hunyengeri, tichairekodha izvi. kana iwe uchida kuona yako faira rechikwereti, tapota taura yedu Vatengi Services timu iyo inokupa iwe mazita ekuonana kune Chikwereti chakashandiswa.
9. LEGAL BASIS YOKUDZIRA YAKO YEMUNHU DATA
9.1 Isu tinongoshandisa yako yega data apo mutemo unotibvumira kudaro. Kunyanya, isu tinoshandisa yako yega data mumamiriro anotevera mamiriro:
9.1.1 yekuita chibvumirano chatinopinda mauri;
9.1.2 pazvinenge zvichikodzera kutevedzera mutemo wepamutemo kana wekutonga watinofanira kuzviita;
9.1.3 pazvinenge zvakakodzera kuchengetedza zvido zvako zvakakosha; uye
9.1.4 nezvezvido zvedu zviri pamutemo (sezvakatsanangurwa mukati meiyi mutemo) nezvido zvako uye kodzero dzakakosha hazviratidze izvi zvido.
9.2 ComWales inotsamira zvakajeka pamusoro pehwaro hwezvido zvepamutemo paunenge uchigadzirisa data munzira dzinotevera. Hwaro uhwu hwakaringana nekodzero dzako uye zvaunofarira uye hahupfuure kodzero yako yekuramba.
9.2.1 ComWales inogona kugovera email kero kuzadzisa vanobatirana pamwe nevatambi kuitira kuti inatsiridze sevhisi yekufambisa yepasuru.
9.2.2 ComWales inogona kuongorora kuvhurwa kwemaimeri ekushambadzira kuitira kuti ivandudze basa rekupa kushambadzira kushambadzira.
9.2.3 ComWales inogona kubata vatengi vane ruzivo rwezvinhu zvakagadziriswa nemutengi kutenga apo kutenga kwacho hakuna kuzadzisa kwakabudirira kuitira kuti kusimudzira basa rekutenga.
10.KUDZIVA KWEMADZIMA DATSI KUVIRI VAKATI
10.1 Pamusoro pemapato matatu ataurwa pamusoro apa, tinogona kuzivisa ruzivo rwako kune vechitatu mapato edu ezvemitemo sezvazviri:
10.1.1 kune vashandi vevashandi kuitira kuti vafambise kupiwa zvinhu kana mabasa kwauri;
10.1.2 kune edu masangano anehukama kuti atsigire hutongi hwemukati;
10.1.3 IT vanopa software inopa yedu webhusaiti uye vanochengetedza data panzvimbo yedu;
10.1.4 varapi vehunyanzvi vanosanganisira vanachipangamazano, magweta, vemabhangi uye veinishuwarenzi vanotipa rubatsiro, kubhengi, zvemutemo, inishuwarenzi uye accounting services
10.1.5 HM Mari Yetsika uye Tsika, vatongi uye zvimwe zviremera zvinoda kuzivisa zvekugadzirisa zviitiko mune mamwe mamiriro; uye
10.1.6 mapato echitatu isu atinosarudza kutengesa, kuendesa kana kubatanidza zvikamu zvebhizinesi redu kana zvinhu. Zvikasadaro, isu tinogona kutsvaga kuwana rimwe bhizinesi kana kubatana navo. Kana shanduko ikaitika kubhizinesi redu saka varidzi vatsva vangu vanoshandisa yako yega data nenzira imwecheteyo sezvakatsanangurwa mune ino yekuchengetedza runyararo.
10.2 Tinogona kuburitsa pachena data kumapurisa, masangano anomirira, mapangamazano ematare kana vechitatu mapato atinenge tiri pabasa repamutemo kuburitsa kana kugoverana data rega kuitira kuti vatevedzere chero mutemo wepamutemo, kana kuti kuitira kuti webhusaiti yedu ishandiswe. mazwi uye mamiriro uye zvimwe zvibvumirano; kana kuchengetedza kodzero yedu, zvinhu, kana kuchengetedzeka kwevatengi vedu, kana vamwe. Izvi zvinosanganisira kuchinjanisa ruzivo nemamwe makambani nemasangano nezvechinangwa chekudzivirira kwehutsinye uye kuderedza njodzi.
10.3 Hatizotengese kana kugovera data remunhu kune mamwe masangano pasina mvumo yako.
11. CROSS-BORDER DATA DHUTERESI
11.1 Pazvinotenderwa nemutemo unoshanda, tinogona kuendesa yako data kuUnited States nedzimwe nzvimbo dziri kunze kweEuropean Economic Area ('EEA') nekuda kwezvinangwa zvakatemwa muhurongwa hwekuvanzika. Isu tashandisa zviyero zvakaenzana zvebvumirano zvinobvumidzwa neEuropean Commission nemasangano iwayo pamwe nekushandisa makambani ari kutora chikamu muEU-US Yakavanzika Shield.
12. DATA KUSVIRA
12.1 Kwatakakupa (kana kwaunosarudza) password inoita kuti ukwanise kuwana zvimwe zvikamu zveSayiti yedu, iwe uno chengeta basa rekuchengetedza iri password. Isu tinokumbira iwe kuti usagovana password nemunhu wese.
12.2 Zvine kusuwa, kuendesa kweruzivo kuburikidza newebhu haina kuchengetedzeka zvachose. Kunyangwe isu tichaita zvatinokwanisa kuti tidzivirire yako data, isu hatigone kuvimbisa kuchengetedzwa kweruzivo rwako rwunotumirwa kune yedu saiti; chero kutapurirana kuri panjodzi yako wega.
12.3 Ruzivo iwe rwaunotipa rwunogoverwa kumaserver edu akachengeteka. Isu takashandisa matanho akakodzera ehurongwa, hwehunyanzvi uye hwesangano akagadzirirwa kuchengetedza ruzivo rwako kubva pakurasikirwa netsaona uye kusawanikwa mukana wekushandisa, kushandisa, kushandura kana kuburitsa pachena. Uye zvakare, isu tinogumira kuwana kune yako pachako data kune avo vashandi, vamiririri, makondirakiti uye nevamwe vanhu vechitatu vane zviri pamutemo bhizinesi inodiwa kuwana kwakadaro.
13. KUPINDA KWAI, KUDZVANYA, KUTENGA UYE KUSHANDISA KUSHANDISA KWEMADHARA
13.1 Zvakakosha kuti data rega ratinobata nezvako rakarurama uye razvino. Ndapota tipeiwo ruzivo kana iyo yemunhu data yatinobata nezvako ichinja.
13.2 Mitemo yekudzivirira kwedata inokupa iwe kodzero yekupokana nekugadziriswa kwe data rako pachako mune mamwe mamiriro ezvinhu kana kubvisa mvumo yako pakugadzirisa kwega data rako apa izvi zvakapihwa. Iwe zvakare une kodzero yekuwana ruzivo rwakachengetwa pamusoro pako uye kuti izvi zvipiwe nenzira isinganzwisisike. Kana iwe uchida kopi yeimwe kana yega yako ruzivo, tapota tumira email kuDPO@comwales.co.uk. Mune mamwe mamiriro ezvinhu isu tine kodzero yekubhadhara mari inobhadharwa kuti itevedzere chikumbiro chako.
13.3 Iwe unogona zvakare kukumbira isu kuita zvinotevera:
13.3.1 gadziridza kana kugadzirisa data rako kana iwe uchinzwa izvi zvisizvo;
13.3.2 bvisa yako pachako data kubva database yedu zvachose;
13.3.3 tinokutumira makopi e data rako pachako mune rinowanzoshandiswa fomati uye unoendesa ruzivo kune chimwe chibvumirano apo iwe watipa izvi kwatiri, uye isu tinogadzira izvi zvemagetsi nemvumo yako kana pazvinodiwa kuti uite chibvumirano; kana
13.3.4 dzora kushandiswa kwewebhu data rako.
13.4 Tinogona kukumbira rumwe ruzivo kubva kwauri kuti utibatsire kuratidza chako uye nekodzero yako yekuwana, uye kukupa iwe data rega ratinobata pamusoro pako kana kuita shanduko dzako dzakakumbirwa. Mutemo wekudzivirirwa kwedatha unogona kubvumira kana kuda kuti isu tirambe kukupa iwe kuwana kune imwe kana iyo yega data yatinobata nezvako kana kuteerera chero zvikumbiro zvakaitwa maererano nekodzero dzako zvataurwa pamusoro apa. Kana isu tisingakwanise kukupa iwe kuwana kune yako data yega, kana kugadzirisa chero chero chikumbiro chatinogamuchira, isu tinokuzivisa iwe nezve zvikonzero nei, zvichitenderwa kune chero mutemo wepamutemo kana wekutonga zvinorambidzwa.
13.5 Ndokumbira utumire chero zvikumbiro zvine chekuita nezve pamusoro apa kune yedu Dziviriro Dziviriro kuDPO@comwales.co.uk uchitsanangura zita rako uye chiito chaungada kuti tiite.
14. KURWARA KUNOGONA KUNOGONA KUTENDA
Iko kwawakapa mvumo yako kuunganidzwa, kugadzirisa uye kuendesa yega data rako, une kodzero yepamutemo yekubvisa kubvumirwa kwako pasi pemamwe mamiriro ezvinhu. Kuti ubvise mvumo yako, kana zvichiita, ndapota taura nesu paDPO@Comwales.co.uk
15.ZVINHU ZVINOGONESESA KUTI TINOGONA KUPEDZESA POLISI
Isu tinochengetedza kodzero yekuvandudza iyi yekuchengetedza chero nguva chero nguva, uye chero shanduko dzatinoita kune yedu yekuvanzika dhata dzinozoiswa pane ino peji. Isu tichakuzivisa iwe kana paine shanduko kuiyi mutemo inokanganisa nemitero mataitiro atinotengesa, kuchengetedza kana maitiro edu. Kana isu tichida kushandisa yako yaimbove yakaunganidzwa data pachako nezvezvikonzero zvakasiyana pane izvo zvatakakuzivisa iwe nezve nguva yekuunganidza, tinokupa chiziviso uye, pazvinodiwa nemutemo, tsvaga mvumo yako, usati washandisa yako yedata data ye chitsva kana chisingaenderani nechinangwa. Tinogona kuseva yako pachako pasina ruzivo kana kubvuma kana zvichidikanwa nemutemo unoshanda kana mutemo.
16. BUDA NESU
Isu takagadza Mukuru Dziviriro Dhata kuti atarisire kutevedza mutemo wevanzika uyu. Kana iwe uine chero mibvunzo, makomendi kana kukumbira zvine chekuita nezve mutemo uyu kana mashandisiro atinoita data rako rega tapota nyorera Nhamba Yedu Yekudzivirira Data kuDPO@Comwales.co.uk. Izvi zviri kuwedzera kune kodzero yako yekutaura neInternet Commissioners Office kana iwe usingagutsikane nemhinduro yedu kune chero nyaya dzaunosvitsa https://ico.org.uk/global/contact-us/
Yakapedzisira kugadziridzwa: 17th May 2018.